Tsy sakana ho an’ny rehetra ny fahamaizinan’ny andro fa dia an-kafaliana tanteraka no nandraisan’ny tanànan’ny voninkazo ny filoha nasionalin’ny Antoko Tiako i Madagasikara. Ela tsy tafafahaona rahateo, ka nifankahita indray ny tia sy ny manina. Mampiseho hatrany ny maha olon’ny vahoaka azy i Marc Ravalomanana, ka tsy mila kenonkenona sy fihetsika amboamboarina, fa tonga dia mifandray hatrany ny tadin-dokanga. Nanao fampielezan-kevitry ny kandida Raharison Hiajaniaina Michel na Jajah Michel laharana faha-7 ny tenany. Tena ao am-pon’ny vahoakan’i Mahajanga i Marc Ravalomanana sy ny kandida tohanany, ka tsy nahasakana ny rehetra hikorana sy handray an-kafaliana azy sy hanohana ny kandida TIM-K25 ny alina efa nirotsaka. Efa hita taratra ny fandresena. Maro rahateo ny zava-bitany tao Mahajanga, raha tsy hilaza afa-tsy ny sisin-dranomasina na ny “bord”, ny Banky Foiben’i Madagasikara. Tsy hay na fifanandrifian-javatra ihany na paikady politika efa nomanina fa anio dia higadona ao an-toerana ihany koa ny filoha am-perinasa Andry Rajoelina. Nezahina naparitaka sy naely ny fampitam-baovaon’ny Prefe any an-toerana mitaona ny olona ho avy sy hanotrona ny fahatongavany anio.